सुझाव: क्यारेक्टर गणना सुरू गर्नुहोस् | आईफोन समाचार
सुझाव: क्यारेक्टर गणना सुरू गर्नुहोस्
त्यहाँ चीजहरू छन् जुन बुझ्न गाह्रो छ। ती मध्ये एक चरित्र गणना किन किन हो सन्देश अनुप्रयोग आईओएस डिफल्ट द्वारा अक्षम छ। हामीले यो बिर्सनु हुँदैन कि iMessage मात्र एक आधुनिक सन्देश अनुप्रयोग हो, तर हामी यसलाई एसएमएस पठाउन पनि प्रयोग गर्दछौं। यसको मतलब यो हो कि यदि हामी कहिले रोकिने भनेर जान्न लेख्न थाल्छौं, एसएमएसको सट्टामा हामी दुई वा तीन पठाउन सक्दछौं। यसबाट कसरी बच्ने?
ठीक छ, समाधान सजिलो छ, तर मलाई लाग्छ यो उत्तम हुन्छ यदि हामीले यसलाई मैन्युअल रूपमा गर्नुपर्दैन भने। बारेमा चरित्र गणना सक्षम गर्नुहोस् सन्देशहरूमा, ताकि हामी कहिले रोक्न वा कहिले "ksas kmo sta" टाइप गरेर शब्दहरू काट्न सुरु गर्न सक्नेछौं।
कसरी आईफोनमा चरित्र गणना खोल्ने
हामी मा खेले सन्देशहरू
हामी तल स्क्रोल र सक्रिय "चरित्र गणना"।
र यो हो। जब हामी लेख्न सुरु गर्छौं हामी केहि देख्दैनौं, तर दोस्रो लाइन बाट हामीले सन्देशहरू पठाउन छोडेका पात्रहरू हामी देख्नेछौं। दायाँ तिरको संख्याले एक व्यक्ति सन्देशमा कति अक्षरहरू समावेश गर्दछ भनेर संकेत गर्दछ। यस लेखको सुरूमा विस्तार गरिएको छविमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि दायाँ त्यहाँ केवल characters० अक्षरहरू उपलब्ध छन्, तर त्यो किनभने मैले गल्तिले फोन नम्बरको सट्टा मेलमा पठाउन छनौट गरेको छु, त्यसैले यसले मलाई गणना गरिरहेको छ। एक MMS सन्देश।
जीवनमा सबै चीज जस्तै, यो गणना सुधार्न सक्छ। मलाई लाग्छ मलाई सम्झना छ जब मसँग मेरो नोकिया 3650 XNUMX० थियो, चरित्र गणनाको अतिरिक्त, म कति सन्देशहरू पठाउँदै छु भनेर संख्या देख्नेछु। एप्पलको गिनतीसँग हामीले यसको आफैं गणना गर्नुपर्नेछ र खराब हुने छैन यदि हामीलाई पठाईएको खण्डमा हामीलाई चार्ज गरिने एसएमएसको संख्या पनि देखा पर्नेछ। तर हे, कमसेकम हामीसँग छ सक्रिय गणना.
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » सुझाव: क्यारेक्टर गणना सुरू गर्नुहोस्
... र अर्को years बर्षमा यसले काम गर्न सक्दछ जब तपाईंले एक भन्दा बढि प्रापकलाई राख्नुहुन्छ।
राल डी मार्टेन भन्यो
वाह! आईओएस of को एक सुविधाहरू पुन: नामकरण र एसएमएसमा अर्को चरित्र गणना थियो। मलाई थाहा छैन यदि मेरो दिमागले यति धेरै समाचारहरू समायोजित गर्न सक्दछ भने
राल डी मार्टेनलाई जवाफ दिनुहोस्
आईफोन १ on मा तिनीहरूले हामीलाई एसएमएस पठाएको समय हेर्न के ठीक गर्दछन्
डिएगो_सीसीएसलाई जवाफ दिनुहोस्
त्यो कुन आईफोनको प्रिन्ट स्क्रिन हो? आईओएस jail.० मा जेलब्रेकको साथ मसँग gs आईजीहरू छन् र मसँग अगाडि विकल्पहरू छन्, जस्तै पूर्वावलोकन, मैले यसलाई असक्षम पार्न धेरै उपयोगी पाएँ ताकि कोहीले पनि स्क्रिनमा एसएमएसको सामग्री नदेखे।
मैले यसलाई सक्रिय गर्‍यो र यसले काम गर्दैन, एक पछाडि पछाडि पछि। र एसएमएस सहयोगी,4मा काम गर्दैन।
फेडरमा जवाफ दिनुहोस्
कम्तिमा यसले तपाईंलाई एक सन्देश पठाउनको सट्टा कसरी दुई वा तीन पठाउन समाप्त भएकोमा जाँच गर्न अनुमति दिन्छ। अब यो सजिलो छ, तपाईंले एक उच्चारण समावेश गर्नुभयो र अधिकतम क्यारेक्टर काउन्टर १ 160० देखि १ 70० सम्म जान्छ !!!!
एक्सेन्ट चीज गलत हुन्छ। उनले मलाई उनीहरुलाई साधारण पात्रको रूपमा भन्छन् (ती केवल एक इकाई उपभोग गर्छन्) साथै जब तपाईँ १ 160० भन्दा माथी जानुहुन्छ यसले एसएमएस बेल्ट जानु हुँदैन भनेर बताउँदछ, केवल अक्षर थप्न जारी राख्नुहोस् र विभाजन काट्नुहोस्। वर्धित SMS ... हो तर आधा
Swampblack लाई जवाफ दिनुहोस्
ठ्याक्कै, यो एउटा मूर्ख समाधान हो, मलाई लाग्छ कि तपाईसँग कति एसएमएस छन् भनेर जान्न अतिरिक्त चरित्र राख्न केही खर्च लाग्दैन, विचार भनेको तपाईको लागि चीजहरू सजिलो बनाउँदछ, %०% समाधान थप्नको लागि होइन ताकि तपाईलाई विभाजित गर्नुपर्नेछ र अन्य %०% राख्नुहोस्, यो तपाईको सेल फोनको नम्बर जस्तै देखिने विकल्प हो जुन तपाईलाई कल गर्दछ तर यसलाई तपाईको सम्पर्क सूचीसँग सम्बन्धित गर्दैन र तपाईले पत्ता लगाउनुपर्दछ कि त्यो संख्या को अनुरूप छ ... केहि मूर्खतापूर्ण कुरा, मँ गर्दैन प्रयोगकर्ता को लागी समाधान को लागी उनीहरु को लागी थाहा छ।
@ फेद, यदि यसले काम गर्दछ भने, के हुन्छ त्यो काउन्टर मात्र देखिन्छ जब तपाईं दुई रेखा वा अधिक लेख्नुहुन्छ, किनकि यो पठाउनुहोस् बटनमा माथि देखा पर्दछ।
यो सत्य हो कि जब तपाइँ एक भन्दा बढि प्रापकलाई एसएमएस पठाउनुहुन्छ, काउन्टर देखा पर्दैन। र उच्चारणको बारेमा कुरा पनि सत्य हो, यो मलाई पनि हुन्छ।
आईडुार्डोलाई जवाफ दिनुहोस्
यदि तपाईं 4K मा रेकर्ड गर्ने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, 6GB आईफोन 16s बिर्सनुहोस्
पीसी मोडेमको रूपमा आईफोन प्रयोग गर्नका लागि गाईड गर्नुहोस्